Posted by Cameron at 02:03
"ကိုကို..... ကျွန်မနဲ့ဝေးနေတဲ့အချိန်တွေမှာ သီချင်းနားထောင်ပါ စာဖတ်ပါ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါ လေချွန်ပါ ဝိုင်နီသောက်ပါ သဘာဝကိုငေးမောပါ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စရာတွေကို ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့မျှဝေခံစားပါ စိတ်ထိခိုက်နာကျင်စရာတွေကို တွေ့ခဲ့ရင်စာရွက်ပေါ်မှာ တန်းစီပြီးချရေးလိုက်ပါ ပြီးတော့ အဲဒီစာရွက်ကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်ပါ ကျွန်မကိုသတိရလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဟိုးအဝေးကြီးမှာ မှုန်ပြပြမြင်နေရတဲ့ တောင်တန်းတွေကိုလှမ်းကြည့်ပါ တဖက်တချက်မှာ သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းတွေနဲ့ ကာရံထားတဲ့ လမ်းကွေးလေးမှာ လမ်းလျှောက်ပါ နေသာတဲ့နေ့တွေမှာ ရွေ့လျားနေတဲ့ တိမ်လိတ်တွေကို လှမ်းကြည့်ပါ သူတို့က ကိုကို့ကို ကျွန်မနားရောက်လာအောင် တနည်းနည်းနဲ့လမ်းပြခေါ်ငင်သွားပါလိမ့်မယ် ဒီကြားထဲမှာတော့ ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သတိရလွမ်းဆွတ်ရင်း အိပ်မက်တွေမက်ရင်း ဘယ်တုန်းကမှပုံမှန်မဟုတ်ခဲ့တာတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်ရင်း သိပ်များများစားစား မကျန်တော့တဲ့ ဘဝရဲ့ ကန့်သတ်ရက်စွဲတွေထဲမှာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တွေ့ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်စောင့်ဆိုင်းရင်း အရင်လိုပဲ လမ်းဆက်လျှောက်ကြတာပေါ့နော် ကိုကို ...... ။ (သက်ဝေ)
မီ သင္တန္းဆင္းေတာ့ ညေနေမွာင္ရီစပ်ိဳးေနျပီ....။ ေဆာင္းဦးေပါက္မို႔ အခါတိုင္းရာသီေတြမွာ ျမင္ေနက် ပုစြန္ဆီေရာင္တိမ္တိုက္ေတြကို ရွာမေ...
ခေါင်းစဉ်က Health and Beauty ဆိုပေမယ့် တခြားပြောစရာလေးတွေလဲ ပြောဉီးမယ်နော်.....။ အာလူးမဖုတ်ရတာကြာပြီလေ.....။ ၂၀၂၀ နှစ်ဟောင်းကိုနှုတ်ဆက် ၂၀၂၁...
ကျွန်မရဲ့ အမွှာအဒေါ်အငယ်က ငရုတ်သီးထောင်းနဲ့ အချဉ်ရည်ဆော့စ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာမကြီး သူ့ဆီကပဲ တစ်နေ့တစ်နေ့ပညာယူနေရတာ...။ အိမ်မှာ နေ့တိုင်း ငရ...
Aug 31 ရက္ေန႔ ဘေလာ့ေဒးကို ကိုယ္ဘေလာ့မွာစာစေရးလာတဲ႔ 2008 ကစျပီး ဒီေန႔ထိကုိ 2011 တုန္းကတစ္ခု ေမာင္မ်ိဳးတဂ္လို႔ Blog day အမွတ္တရ ဆိုတဲ႔ပိ...
The Voice Myanmar season3Grand Final. Twan Pee from Team Kyar Pauk ကျွန်မက သီချင်းကြိုက်သူဆိုတော့ တီဗီကလာတဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေထဲက The...
Google လုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုရဲ့ သတိပေးချက်ကြောင့် ကျွန်မဘလော့ဖွင့်ထားတဲ့ အီးမေးလ်ကို Log in ပြန်ဝင်ရတယ်...။ အီးမေးလ်လိပ်စာတွေ လျှို့ဝှက်နံပါတ်...
ခေါင်းရင်းဘေးနားက ဖုန်းမက်ဆေ့သံမြည်လာလို့ နာရီကြည့်လိုက်တော့မှ မနက် ၇ နာရီ ၄၅မိနစ်ရှိပြီ....။ ဖုန်းယူကြည့်ရင်း ကိုယ်တစ်ချက်ပြုံးလ...
လိုင္းေကာင္းခ်က္ေနာ္ သံုးလပိုင္းကတည္းက ခရီးသြားလိုက္တဲ႔ ပံုေတြက ခုမွတင္လို႔ျပီးသြားတယ္...။ ခရီးသြားပို႔စ္ေတြက အခန္းဆက္ေတြသိပ္ရွည္ၾကတယ္...။ ...